Musha - Visa Mubatsiri
Mhoroi, Tinogona Sei Kukubatsira Iwe?
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Vamiriri veUS vari kuvhura zvekare. Visa Mubatsiri anoenderera mberi achiona COVID-19 denda kune chero zvigadziriso zvine chekuita nezvekupinda uye kufamba.
Dzidza maitiro ekuti uwane visa yeUS nekukurumidza uye nyore.
Joinha iyo Visa Mubatsiri Network
Tora vhiza yekuUS, pasina kunetsa.
Maturatifomu edu emidziyo ine simba, quizzes uye nyore-kunzwisisa magwara anokutsigira iwe kuburikidza neUS visa yako uye rwendo rwekupinda munyika, nhanho dzese dzenzira.
Dzidza maitiro ekufamba uye kufamba neVisa Mubatsiri!
Green Kadhi Lottery Visa
Tsika Shanduko Mavhiza
Nyika yekutanga-mu-imwe vhiza chikuva.
Kuwana mvumo yeUS visa harisi basa riri nyore.
Kune akawanda matanho akaomarara ekupfuura, maze isingaperi yezvinhu zvepamhepo, uye kuzvifungidzira uri wega zvinogona kukuremedza.
Ndosaka takagadzira Visa Mubatsiri; yako-yekumira-shopu online vhiza uye yekufambisa zviwanikwa nzvimbo.
Kunyangwe iwe wave kuda kunyorera vhiza yeUS kana iwe watonyorera uye wakanamatira kumwe munzira - edu epuratifomu, mibvunzo, uye maturusi anokufambisa iwe kuburikidza nematanho ekuti vhiza yako igamuchirwe, nekukurumidza.
Sarudza nyika yako.
Yedu chikuva inopa US vhiza uye ruzivo rwekupinda munyika inoenderana nedzimwe nyika.
Sarudza nyika yako pazasi, kuti uone kana isu tine vatungamiriri, zviwanikwa uye ruzivo kune yako nyika!
Unobva kunyika ipi Arubhaniya Arujeriya Angola Argentina Arumeniya Azabhaijani Bhahareni Bhangiradheshi Bherarusi Benin Bhutani Borivhiya Bhoziniya neHezegovhina zimbabwe Bhuraziri Burkina Faso Bhuruneyi Bharugeriya Kepu Vhedhi Kambodhiya Kameruni Chadhi China Korombiya Cote d'lvoire Kosita Rika Kiroshiya Kiyuba Ripabhuriki Dhominika Ekwadho Egypt E Savhadho Eritrea Ithiyopiya Gabon Gambiya Georgia Ghana Guatemala Guinea Honduras Hong Kong India Indonezhiya Iran Iraki Izirayeri Jamaika Jodhani Khazakisitani Kenya Kuweti Kijisitani Laos Rebhanoni Ribhiya Masedhoniya Malawi Marazhiya Mali Morishiyasi Mekisiko Morodhovha Monako Mongoriya Mondenegiro Moroko Mozambiki Namibhiya Neparo Nikaraguwa Naija Naijeriya Omani Pakisitani Paresitina Panama Paraguay Peru Firipaini Kwata Romaniya Rashiya Rwanda Saudhi Arabhiya Senegal Serbia Sierra Leone Singapowo Somaria Chamhembe Afrika Shiri Ranga Sudhani Tajikisitani Tanzania Tairendi Togo Tunisiya Teki Tekimenisitani Uganda Ukireni Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi Uruguay Uzebhekisitani Venezuela Vietnam Yemeni Zambia zimbabwe USA
-Online Visa Rwendo-
Dzidza maitiro ekunyorera vhiza yeUS mune isingasviki maminetsi makumi matatu.
Haufanire kupedza maawa uchinyura mune ruzivo kuti upindure mibvunzo yako inoenderana nevisa.
Yedu yepamhepo Visa Journey chishandiso inoshandisa yakapusa akawanda-sarudzo mibvunzo iyo inokurumidza kudzika pasi chaipo pauri iwe mune yako vhiza kana yekufambisa rwendo.
Zvichienderana nemhinduro dzako, Visa Mubatsiri anobva akuunzira iwo chaiwo madhairekitori uye ruzivo rwakanangana neunoteedzera kuti ufambise vhiza yako kunyorera pamwe chete.
Ronga nhanho dzako dzinotevera, mumaminitsi.
Nhungamiro dzedu dzinoputsa vhiza yakaoma uye misoro yekupinda munyika mumatanho ari nyore kunzwisisa.
Nongedzo yega yega ine up-to-date ruzivo rwunongoshanda chete kune ako wega mamiriro uye nyika kwaakabva.
Mune imwe maminetsi, iwe unogona kuverenga vatungamiriri vedu, unzwisise nhanho dzako dzinotevera, uye wozotora matanho nekukurumidza.
-Visa Kukodzera Bvunzo-
Fungidzira mikana yako yekuwana vhiza, usati watombonyorera.
Yedu Visa Kukodzera Bvunzo chishandiswa chinotungamirwa-chinotungamirwa chinga fungidzira yako mikana yekubudirira kuwana yeUS visa.
Icho chishandiso zvinhu mune yako ruzivo ruzivo pamwe nehukama hwazvino pakati penyika yako neUnited States.
Zvichienderana nezvingave zvako mamaki, unogona kusarudza kuti ungakanganisa nguva yako, mari uye kushanda nesimba kunyorera vhiza.
-Batana pamwe nehunyanzvi-
Njodzi-yemahara, inoitwa-yako-iwe visa kunyorera.
Kusainira kuchikuva chedu kuchakupa mukana wega wehunyanzvi vhiza & magweta ekupinda munyika, pamwe neanotendwa vhiza ekugadzirisa vashandi kuti vhiza yako yeshanduro iitirwe iwe.
Unyanzvi hweumwe neumwe mukurumbira uye mukurumbira zvakanyatso kuongororwa kuti uone kuti unobatana newaunofambidzana naye kuti akubatsire neyako vhiza kesi.
Wana kuwana kuzere kuchikuva chedu nekunyoresa nemubhadharo diki kamwe-wekubvisa.
2. Visa Mubvunzo
Pindura mibvunzo yakapfava-yakasarudzika kuti ubatsire chikuva chedu kutetepa pasi chaipo pauri muvisa yako kana rwendo rwekupinda munyika.
3. Tora Chiito
Tora akakodzera, akasarudzika mavhiza vhiza, fungidzira mikana yako yekuwana vhiza needu Visa Kukodzera Bvunzo uye batana pamwe yakasimbiswa 3rd-bato kudyidzana.
Kiinura zvizere hwose kuwana Visa Mubatsiri aine diki, kamwe-off kudyara kweinongori $ 25 USD.
Kuwanika kune iyo Visa Helper Platform
Kuwanika kune vanoona nezvekupinda munyika uye vashanduri vevisa
Visa Kukodzera Bvunzo Turu
Zvemazuva-ese maVisa Guides
Pamhepo Zviwanikwa & Blogs
Akazvitsaurira Vatengi Kutsigira
Chengetedza pamhosho dzinodhura dzekushandisa
Iko kukanganisa mune yako vhiza kunyorera kunogona kunonoka kubvumidzwa kwemwedzi - kana kunyangwe makore.
Paunosaina Visa Mubatsiri, haungochengetedze chete nguva usinga tsvagirise zvese iwe pachako, unenge uinewo ruoko rwekubatsira kukudzivirira kubva mukuita zvinodhura zvekushandisa zvikanganiso.
Ini ndakakwanisa kuziva chaizvo zvekuita kuti nditore murume wangu abve kuSaudi Arabia kweSpousal Visa. Kushandisa chikuva ichi kuri nyore kwazvo! Zvakanditorera isingasviki maminetsi gumi uye ndaiziva maitiro ekunyorera. Ini handidi kutenda Visa Mubatsiri zvakakwana!
Mumiriri weUS muRussia zvainetsa kubata nazvo, takanga tisingazive zvekuita kuti Fiance Visa yedu ipfuure. Isu tava kuziva zvese zviripo kuziva nezve edu anotevera matanho nekuda kweVisa Mubatsiri! Ivo vanoita zvese zviri nyore kwazvo kuziva. Mudzimai wangu akawana vhiza yake mumaoko uye aneni muU.SA.
Visa Mubatsiri akachinja ini nemukadzi wangu hupenyu zvachose. Ini ndaikwanisa kunzwisisa kuti ndeipi vhiza yandaida, maitiro, uye nhanho dzese dzataida kuona kuti tawana Spousal Visa yedu. Ini ndinokurudzira zvikuru chero munhu ari kunetseka nenyaya yavo yekuenda kune dzimwe nyika kuti ashandise Visa Mubatsiri.
Ini ndakagamuchirwa muyangu kurota University muVirginia! Ndakanga ndisina nguva kana ruzivo rwekuzvishandisa asi Visa Mubatsiri akaita kuti zvive nyore kwazvo. Pasina kana zuva rimwe ndakakwanisa kunyorera Visa Mudzidzi.
Visa Mubatsiri ndicho chikonzero nei mukoma wangu mudiki achiuya kuUnited States mushure memakore ekumirira. Ini ndaive ndisingazive uye ndanga ndisina zano rekuti ndingafambe sei nehurongwa, nekushandisa Visa Mubatsiri ndakakwanisa kusangana negweta kuti ritibatsire nenyaya yedu. Zvakawanda rudo kuna Visa Mubatsiri!
Mudzimai wangu wemakore manomwe akazosvika kuUSA mushure mekupedza mwedzi yakawanda achitsvaga maitiro ekunyorera Visa Yekuroora. Ndatenda mwari ndawana Visa Mubatsiri. Iwo mazano evisa ari nyore kunzwisisa uye kutevedzera. Ndine chikwereti chose kuvanhu ava, maita basa.
Sign up kuti ugamuchire (pavhiki) matsamba enhau akaunzwa akananga kubhokisi rako rekunyora.
MABASA, ZVINODZIDZISWA NEZVINOGONESESWA ZVATINOPIWA NESU HAZVISI MAZANO EZVEMutemo NEZVINANGWA ZVENYAYA CHETE. UNOFANIRA KUTAURA GWETA RAKO KUTI UWANE MAZANO NEREMEKEDZO KUNYAYA DZAKANYANYA KANA KUTI DAMBUDZIKO. KUSHANDISWA KWE KUSVIKIRA KWETE WEBHETSI KUSA GADZIRA ANOGONESA-MUTengi, KANA KUFANANA KUSANGANA.
123 King Rd. West Street, Guta 1234
Copyright © 2020 Visa Mubatsiri - Kodzero dzose dzakachengetedzwa
cookielawinfo-checbox-analytics 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetera mushandisi mvumo yemakuki ari muchikamu "Analytics".
cookielawinfo-checbox-inoshanda 11 mwedzi Iyo cookie yakagadzwa neGDPR cookie mvumo yekurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Anoshanda".
cookielawinfo-checbox-vamwe 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Zvimwe.
Iwo masevhisi, zvishandiso, uye ongororo yakapihwa neUS haisi yepamutemo kuraira uye kune ruzivo rwezvinangwa chete uye haifanire kuvimbwa pazano rezvemutemo kana chako wega sosi yeruzivo. Iwe unofanirwa kubata gweta rako kuti uwane zano zvine chekuita nechero nyaya kana dambudziko. Kushandisa uye kuwana iyo webhusaiti hakuiti chero gweta-mutengi hukama. Maonero uye ongororo yakaratidzwa pawebhusaiti haina kukwana uye ndeye ruzivo chete. Kunyangwe iyo ongororo yedata yakapihwa pawebhusaiti yakagadzirwa uye yakagadziriswa kubva kumanyuko anotendwa kuva akavimbika, isu hatigadzire uye haufanire kuvimba nechero waranti, inoratidzwa kana kutaurwa, inoitwa maererano nekururama, kukwana, kukwana, mutemo, kuvimbika, kana kubatsira kwechero ruzivo irworwo. Pasina mamiriro ezvinhu tichava nemhosva kwauri chero ipi zvayo semhedzisiro yekushandisa saiti kana kuvimba neruzivo rupi nerupi rwunopihwa panzvimbo iyi. Kushandisa kwako saiti uye kuvimba kwako pane chero ruzivo rwesaiti zvinongova panjodzi yako wega.
Ndatenda nekujoinha Visa Mubatsiri! Iyi webhusaiti yakagadzirirwa kubvisa nyonganiso maererano nemavisa uye kufamba nekukuratidza iwe ruzivo rwaunoda. Pindura mibvunzo inoenderana neiyo vhiza yaungade kubatsirwa nayo kana kuda kunyorera. Rangarira kupindura iyi mibvunzo kubva mumaonero emunhu anenge achinyorera (Uyo ari kunyorera vhiza.) Kana iwe uchitova muUnited States uye uchishandisa masevhisi edu pachinzvimbo chemumwe munhu wauri kunyorera, sarudza sarudzo dzakakodzera pavanouya kumusoro. Kana iwe uchida rubatsiro, sarudza bhatani rekutsigira uye titumire iwe kubvunza kwako.
Iwe hauna kunyorera vhiza iyi parizvino, hapana kunetseka! Kutanga, tichaita kuti iwe utore iyo Visa Kukodzera Bvunzo. Iyi mibvunzo yakagadzirirwa kukuratidza iwe mikana yekuwana vhiza iyi nekupindura mibvunzo mishoma maererano neanokumbira (Uyo ari kunyorera vhiza). Iyo yakarongedzwa nekushandisa chaiyo nguva dhata yehukama hwezvematongerwo enyika, hupfumi, uye chengetedzo pakati penyika yemunyoreri uye nyika yakanangwa. Uyu muedzo hauna kuitirwa kuve wakakwana zvakakwana; Chinangwa chayo chega ndechekukupa fungidziro yekuwana vhiza. Ndokumbira utarise, iyo Visa Eligibility Test ndeye INFORMATIONAL PURPOSES CHETE, hapana nzira yaunofanirwa kushandisa mhedzisiro seyekupedzisira sarudzo yekunyorera sezvo yega vhiza kesi inobatwa zvakasiyana paembassy zvichibva pakukodzera kwayo.
Pano iwe unowana runyorwa rwevheneti, vane marezinesi evamiriri vekunze vanogona kukubatsira iwe kunyorera vhiza kana kukubatsira iwe nechako chazvino kunyorera. Sarudza mafirita kuruboshwe anoshanda kune yako vhiza kesi kuti udzikise gweta rinonyanya kugadzirisa yako vhiza mhando. Iwe unogona zvakare kutsvaga rimwe gweta nemazita mubhawa rekutsvaga. Isu hatiite chero mamiririri kana warandi nezve kudzidziswa kana hunyanzvi hweavo chero Vanopa. Iwe unozopedzisira uine mutoro wekutarisa hunhu uye kusarudza yako chaiyo Mupi. Nekuramba uchishandisa masevhisi edu, unobvuma kusagovana ruzivo rwegweta nechero ani.
Sezvo iye anenge achinyorera asina kunyorera vhiza, iwe unotora iyo Visa Eligibility Test. NDINOKumbira kuti uve akatendeseka nemhinduro dzako. Iko hakuna kubiridzira kuburikidza neUS visa maitiro, iwe chete unobatsirwa kubva pamuedzo uyu. Bvunzo iyi yakagadzirirwa kukuratidza mikana yekuwana vhiza iyi nekupindura mibvunzo mishoma maererano neanokumbira (Uyo ari kunyorera vhiza). Iyo yakarongedzwa nekushandisa chaiyo-nguva dhata yehukama hwezvematongerwo enyika, hupfumi, uye chengetedzo pakati penyika yemunyoreri neUnited States. Uyu muedzo HAUNOFANIRA kuve wakakwana zvakakwana; Chinangwa chayo chega ndechekukupa fungidziro yekuwana vhiza. Bvunzo iyi inogona kutorwa KAMWE chete. Kana iwe uchida kutora bvunzo yeimwe vhiza, unogona kugadzira account nyowani. Iwe unogona kudzokera kumashure uye wotarisa mhedzisiro yako pasi peiyo "Akaundi Yangu" sarudzo iri pamusoro. Ndokumbira utarise, iyo Visa Eligibility Test ndeye INFORMATIONAL PURPOSES CHETE, hapana nzira yaunofanirwa kushandisa mhedzisiro seyekupedzisira sarudzo yekunyorera sezvo yega vhiza kesi inobatwa zvakasiyana kune embassy-zvichienderana nezvakakodzera.
Pano iwe unowana iwo iwo runyorwa rweese mavisa magiraidhi ayo akananga kune yako nyika. Tsvaga yako nyika mune inodonha, wobva wasarudza vhiza gwara raunoda kuona. Iwe unogona kudzokera kune ino peji nekudzvanya "Yangu Visa Rwendo" pamusoro, uye kusarudza "Maitiro Ekushandisa".
Pano iwe unowana runyorwa rwevheneti vebato rechitatu vadyidzani iwe vaunogona kushandisa kunyorera vhiza yako. Vese vanobatirana vanoongororwa pamwero weVisa Mubatsiri. Iwe unogona kudzvanya mudiwa pane ino peji kuti utungamirirwe kune yavo webhusaiti. Iwe unobvuma kuvimba kwako kune chero Vanopa kana ruzivo rwunopihwa neMasevhisi iri panjodzi yako wega uye unotora mutoro wakazara kune njodzi dzese dzakabatana nazvo.